Gụnyere na Instagram Foto Abawanye na ntinye aka Email 7x | Martech Zone
Gụnyere Instagram Foto Increbawanye Ntinye Aka Email 7x
Monday, October 19, 2015 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
In Steeti Azụmaahịa Anya, ihe ọmụmụ nke Denye na Marketingtù Azụmaahịa Internetntanetị, naanị 8% nke ndị na-ere ahịa kwenyesiri ike na ha na-eji ihe oyiyi eme ihe n'ụzọ dị mma iji kpoo ntinye aka na email.
76% nke ozi ịntanetị na-agụnye bọtịnụ mgbasa ozi mmekọrịta mana naanị 14% nke ozi ịntanetị gụnyere ihe osise.
Nkwa mbụ nke mgbasa ozi mmekọrịta bụ ikike maka ụdị iji mepụta mmekọrịta ka mma karịa ndị ahịa ha. Nke a na - eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịbịakwute ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Mee ka eziokwu a jupụta na ntoputa nke ihe osise na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụghị ihe ijuanya na ijikọ mgbasa ozi na ihe osise dị ike. Gbakwunye nke a iji ziga ndị ahịa gị ozi izizi, ị nwere ike ịnọ na ihe!
Mgbe ị na-elele ụdị amalitela iji ihe oyiyi Instagram n'ime ozi ịntanetị, uru ya doro anya. Dịka ọmụmaatụ, otu ụlọ ahịa mgbatị ahụ nyefere 7X na-ebuli aka na foto ngwaahịa na weebụsaịtị ha naanị 24 awa mgbe ha zigachara email mbụ nke Instagram.
Gwọọ ma Mbughari ink kere ihe omuma ndia, Instagram + Email: Romancebọchị ọhụụ nke oge a.
Tags: gwọọemail na-elekọta mmadụemail na mgbasa ozi mgbasa oziinstagramihe ngosi instagrammkpakọrịta ịntanetịmbughari inkelekọta mmadụ na emailmgbasa ozi mgbasa ozi na emailazụmahịa azụmahịa
Igodo 3 iji mee ka ahụmịhe ngwa ngwa… na Ego ha ga enweta